च्याम्पियन्स लिगः रियल मड्रिड ५–० ले विजयी, रोनाल्डाको टिम युभेन्टस पराजित - Gokarna News from Nepal
शनिबार, भदौ ०७, २०७६
च्याम्पियन्स लिगः रियल मड्रिड ५–० ले विजयी, रोनाल्डाको टिम युभेन्टस पराजित
एजेन्सी– युरोपियन क्लव फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा साविक विजेता रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटीले फराकिलो जित निकालेका छन् । त्यस्तै युभेन्टसलाई पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले नकआउट चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
गएराति भएको खेलमा घरेलु मैदान एलियान्ज एरिनामा सुरुआती अग्रता लिएर पनि युभेन्टसले खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेले पनि ६५औं मिनेटमा क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो पूर्वक्लवबिरुद्ध उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । तर, खेलको अन्तिम पाँच मिनेट संहालिन नसक्दा युभेन्टसले समूहको दुई खेल अगावै नकआउट चरणमा पुग्ने अवसर गुमायो ।
युनाइटेडका लागि जुहान माटाले ८६औं मिनेटमा शानदार फ्रिकिक बराबरी गोल गरेका थिए । त्यसको तीन मिनेटपछि युभेन्टसले आत्मघाती गोल गर्न पुग्यो । पाउल पोग्वाले प्रहार गरेको फ्रिकक युभेन्टसका एलेक्स सान्द्रोलाई छोएर गोल हुन पुगेको थियो ।
जितपछि समूह एचमा युनाइटेडको ७ अंक भएको छ भने शीर्ष स्थानमा युभेन्टसको ९ अंक छ । गएराति नै स्वीट्जरल्याण्डको योङ ब्वाइजलाई ३–१ गोलले हराएको भ्यालेन्सियाको ५ अंक छ ।
समूह जी अन्तर्गत रियल मड्रिडले चेक रिपब्लिकको भिक्टोरिया प्लाजेनलाई ५–० गोलले हराउँदा करिम बेञ्जेमाले २ गोल गरे । त्यस्तै कासेमिरो, ग्यारेथ बेल र टोली क्रुजले एक एक गोल गरे । भिक्टोरियाको मैदानमा रियलले चार गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो । यही समूहमा रोमाले सीएसकेए मस्कोभालाई २–१ गोलले हरायो ।
जितसँगै रियल र रोमाले ९–० अंक भएको छ । यता म्यान्चेस्टर सिटी युक्रेनको शख्तर डोनेक्सलाई ६–० गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै समूह एफबाट नकआउट चरण नजिक पुगेको छ । घरेलु मैदान इत्तिहाद रंगशालामा सिटीका लागि ब्राजिलियन स्ट्राइकर गाब्रियल जेससले ह्याट्रिक पूरा गरे । उनले दुई गोल पेनाल्टीमा गरे भने एक गोल खेलको अन्तिम मिनेटमा गरेका थिए । त्यस्तै डेभिड शिल्भा, रहिम स्टर्लिङ र रियद मेहेरेजले एक एक गोल गरे । जितसँगै सिटीको ९ अंक भएको छ ।
बुन्डेस लिगाः डर्टमन्डको दोस्रो जित, कोलन ३–१ ले पराजित
टोरेसले लिए खेल जीवनबाट सन्न्यास
सन्यास लिनेबारे के भन्छन् पोर्चुगलका स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो ?
एकदिवसीय क्रिकेट वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्यो
युरोपा लिग फुटबल छनौट : वुल्भह्याम्पटनद्धारा टोरीनो ३–२ ले पराजित
तीजको रमझममा पुगेका रोका मृत फेला
पतिको हत्या गर्न पाँच खेताला !
रविले यसकारण तोकिएको भन्दा धेरैदिन प्रहरी हिरासतमा बस्नु पर्‍यो
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने– “सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर मजा मान्ने प्रवृत्ति हामीभित्रै छ”
रविको पक्षमा बोल्दै निखिल उप्रेतिले भने– सत्य बोल्ने मान्छेले नेपालमा दुःख पाउँछ !
“सामान्य मानिसको आवाज उठाउने रविले न्याय पाउनुपर्छ”– कलाकार दिपकराज गिरी